घरमा बिप्लब समूहले ब’म प’ड्काएपछी बाँस्कोटाले दिए यस्तो प्रतिक्रिया…हेर्नुहोस!
काठमाडौं, निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो नि,र्माणधिन निवासमा भएको ब’म वि’स्फोनको घ,टनाबारे छा’नबिन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार भक्तपुरको लोकन्थली मनोहरा फाँटस्थित घरमा कुकर ब’म वि’स्फोट भएको थियो । वि’स्फोटपछि बाँस्कोटाले छा’नबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सबै विषयमा छा’नबिन हुनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘मैले सम्पूर्ण रुपमा सबै विषयहरुको छा’नबिन होस् भनेरै रा’जीनामा दिएको हो, अहिले यो सब कसले र किन गरिरहेको छ, म बढी बोल्दिनँ, यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन, सबै विषयको छा’नबिन हुनुपर्छ ।’
उता से’क्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद का,ण्डमा ७० करोड घूसमा मो’लमोलाई गरेकोलगायत विभिन्न १० आ,रोप लगाउँदै विप्लव नेकपाले बास्कोटाको घरमा वि’स्फोट गराएको जनाएको छ।यी हुन् विप्लव समूहले बास्काेटावि’रुद्ध लगाएका १० आरोप-१‍. से’क्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्र,करणमा ७० करोड घू,स मागेर भ्र,ष्टाचारी अनुहार उ’दाङ्गो पारेकाले ।२. २४ अर्बको से’टलाइट खरिद प्र,करणमा करोडौँ रकम भ्र,ष्टाचार गरेकाले ।३. १९ अर्बको फोर जी सेवा विस्तारका दौरान करोडौँ रकमको दु,रुपयोग गरेकाले ।४. १० अर्बको अ’प्टिकल फाइबर विस्तारमा करोडौँ कु’म्ल्याएर देशलाई क’ङ्गाल बनाउने भुमिका खेलेकाले ।५. मोबाइल डि’भाइस र स्कुलमा इन्टरनेट सेवा–सुविधाका नाममा करोडौँ हि’नामिना गरेकाले ।
६. सरकारको प्रवक्ता पदको दु,रुपयोग गरी देशभरका ठूला परियोजनाबाट अर्बौं घो’टाला गरेकाले ।७. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्र’तिबन्ध लगाउने, फा’सिवादी द’मनको यो’जनाकार र ह’त्याको म’तियार बनेकाले ।८. राष्ट्र, जनता र क्रा’न्तिका वि’रुद्ध गो’यबल्स शै’लीमा नि’कृष्ट, उ’द्दण्ड, अ’राजनीतिक र गु’ण्डागर्दी भूमिकामा उ’त्रिएकाले ।९. आफ्नो औ’कात भुलेर क्रा’न्तिप्रेमी जनतामाथि फा’सिवादी द’मन ला’द्ने, च’रम अ’सहिष्णु, द’लाल पुँ’जीवादी स’त्ताको अ’सली ठे’केदार र मुलुकमा साँ’ढेखालको दा’दागिरी म’च्चाएकाले ।१०. देशलाई अहिलेको ज’र्जर र स’ङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्याउने ना’मुद द’लाल भ्र’ष्टमध्ये एक भएकाले ।